सिल्लल्ट विशेषज्ञ अनलाइन अनलाइन फराउडको बारेमा - कस्तो र कसरी
अनलाइन धोखाधडीको फैलावट बढ्दै गएको छ। आज जस्तो कि तपाईं त्यो मनिटरमा हिंड्नु हुन्छकेवल भन्न सकिँदैन कि वास्तविक को हो र धोखाधारी को हो। तिनीहरूले (खराब केटा) सिकेका छन् कसरी आफूलाई लुकाउन र हजारौं मानिसहरूलाई इन्कार गर्नआफ्नो एन्टिटिक्स को माध्यम ले मन को शांति।
तथापि, तपाइँ आफैले आफूलाई बचाउन सक्नुहुनेछ। यो सजिलो छ: सामान्यसँग परिचित हुनुहोस्अनलाइन धोखाधडीहरू। जेसन एडलर, देखि विशेषज्ञ सेमील्ट ,मानिन्छ यो तपाईंको गोप्य जानकारी, बैंक विवरणहरू, र पैसा सुरक्षित राख्नेछ।
पैसा पठाउन कहिल्यै नबिर्सनुहोस् वा कसैलाई क्रेडिट कार्डको विवरण तोक्न नदिनुहोस् तपाईं न त जान्नुहुन्छ र न त भरोसा राख्नुहोला।
डेटिंग वेबसाइटहरू हजारौंलाई माया पाउन खोजे। दुर्भाग्यवश, केही खराब तत्वहरूगलत स्पेसलाइटमा अनलाइन डेटिङ फेंकिएको छ। सावधान हुनुहोस्। डेटिङ स्क्यामले कानूनी डेटिङ साइटहरूमा प्रकट गरेको छ र ती सिर्जनाहरूमा सिर्जना गरेका छन्अचानक निराशाजनक मानिसहरू। यो के हुन्छ:
नक्कली वेबसाइटमा (जो एक वैधको लागि पठाउँछ), धोखाधडीले तपाईंलाई चार्ज गर्दछखाता बनाउनुहोस्, हुकअप र सम्भावित प्रेमी / साथीसँग कुराकानी गर्नुहोस्। यसबाट बच्न, डेटिङ साइटहरूको समीक्षाहरू जाँच गर्नुहोस् ताकि तपाईलाई थाहा छ के होराम्रो र के छैन।
एक वैध वेबसाइटमा धोखाधडीले खाता सिर्जना गर्दछ। उनीहरूले प्रचार गर्छन्तपाईंमा चासो राख्नुहोला, तर वास्तविक अर्थमा, उनीहरु राम्रो हुदैनन्। त्यसपछि तिनीहरू एक बिरामी रिश्तेदार वा आपातकालीन अवस्थामा ल्याउनेछन् जसको लागि तिनीहरूले पैसा चाहिन्छ:जसको एक भाग उनीहरूले तपाईंलाई सोध्न चाहन्थे। अन्य अवस्थामा, तिनीहरूले आफैलाई उपहारहरू साथमा धकेल्न सक्दछन्, त्यसपछि तिनीहरू तपाईंको बैंक विवरणहरू सोध्छन्।एक पैसा संग तपाईं पैसा पठाउनको साथ।
प्रतियोगिता, लॉटरी र स्लेपस्टिक्स घोटाला
यो टाढाको सबैभन्दा धेरै प्रकारका इमेल र अनलाइन स्क्याम हो। तपाईले ईमेल पाउनुहुनेछतपाईंको सोशल मिडिया खातामा सन्देश तपाईंलाई बताउनुहुन्छ कि तपाईंले भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँको क्रेडिट कार्ड विवरण प्रदान गर्नुहुने पुरस्कार जितेको छ।तिनीहरू तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न प्रयास गर्दछन् कि यो कर दायित्व हो वा त्यस प्रकारको कुरा हो।.धोका नगर्नुहोस्। यो एक शर्म छ। यो घोटाला हो। यदि तिमीकुनै पनि लॉटरी, स्न्यापस्क वा धैर्यमा भाग लिनु भएन तब सावधान रहनुहोस्।
यी तपाईंको ईनबक्सलाई पलायन गर्दछ। यस घोटालामा, एक व्यक्तिले चासो लिन चाहानुपर्छतपाईँका उत्पादनहरू / सेवाहरू, वा यो तपाईंसँग व्यापार गर्न इच्छुक एक संगठन हुन सक्छ। यदि उनीहरूलाई प्रक्रियामा मद्दत गर्न पैसा अनुरोध गर्दछउनीहरूको अन्तमा एक भुक्तानी, त्यसपछि तपाईं गद्दा आश्चर्यको लागि हुन सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ, उनीहरूले तपाईंको क्रेडिट विवरणको लागि अनुरोध गर्छन् तापनि यस अवस्थामा,तिनीहरूले तपाईंको बैंक वा तपाईं प्राय: संग कुराकानी गर्न कुनै पनि कानूनी संगठन हुन चाहानुहुन्छ। तपाईंले कुनै पनि लिङ्कमा क्लिक नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईले बैंक बोलाउनु भएको छैनउस्तै पुष्टि गर्न। यसबाहेक तपाईं ओभरपेन्ट स्क्याममा आउन सक्नुहुन्छ जुन ग्राहकले सेवाको लागि ओभरपेड गरेको दावी गर्दछ।तिनीहरू तपाईंबाट फिर्तीको लागि अनुरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
असल उदाहरण "घरबाट काम" हुने उदाहरण हो जसले हजारौंको प्रतिज्ञा गर्छसानो कामको लागि डलर। अन्य अवस्थामा, तपाइँ सुन्दर कामदार संग राम्रो काम ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ। यद्यपि एक पकड छ। तपाईंले शुल्क तिर्न पर्छकाम सुरक्षित गर्नुहोस्। यस्तो घोटालामा तपाईंको पैसा गुमाउनु हुँदैन।
खरीद / बेचन नीलामी घोटाले
अनलाइन खरीदारी र बिडिंगमा स्विच गर्ने व्यक्तिहरूको साथमा, त्यहाँ घोटाला उत्पन्न भएको छ:खरिद / बिक्री नीलामी बेच। जब तपाइँ एक उत्पादनको लागी बोल्नुहुन्छ र बोली जित्न असफल भए तपाई आफ्नो व्यवसायको बारेमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाइँ कसैलाई कल प्राप्त गर्नुहुन्छविजेता बोल्डरको दाबी गरे, र अब तपाईंले बोली जित्नुभएको छ। तिनीहरू के चाहन्छन्? प्लेटफार्म बाहिर (वेबसाइट) बाहिर व्यापार गर्न। नगर्नुहोस्यो गरौं। तपाईं आफ्नो पैसा पकाउनु हुनेछ, र तपाईंले मूल्य पाउनुहुनेछैन (तपाईले बोली को लागी पनि)।
यो अनलाइन स्क्यानरमा, एक कुत्ता ब्रेडरले आफ्ना / पिल्लाहरू देखाउँछन्, जुन उसले छबिक्री तिनीहरू दर्ता कागजातहरू र धेरै तस्वीरहरू पठाउँछन्। सम्झौतालाई अन्तिम गर्न, तपाईं शिपिंग शुल्क तिर्न सोध्नुभएको छ जुन त्यसपछि हुनेछरिफन्ड भयो। अन्तमा, तपाईं पैसा तिर्नुहुनेछ, र तपाइँ कुनै पनि पिल्ला प्राप्त गर्नुहुने छैन। तिनीहरूको रेखा पनि जवाफ दिइएन।
. - boleto opencart